Fahantran’ny mponina: tsy ampy 3 % ny afaka mindram-bola amin’ny banky | NewsMada
Fahantran’ny mponina: tsy ampy 3 % ny afaka mindram-bola amin’ny banky
Ambany dia ambany ny olona manana fifandraisana amin’ny banky eto Madagasikara, tsy ampy 10 % raha raisina hatrany amin’ny mpampindrana vola madinika ireny (IMF). Ratsy toerana i Madagasikara aty amin’ny tapany atsimon’i Afrika, araka ny fanadihadiana nataon’ny Banky iraisam-pirenena, amin’ny lafiny fihariana raha ny banky. Ny vola avy aminy anefa no hery iray manosika ny fihariana lehibe na madinika, mampihodina ny toekarena amin’ny ankapobeny. Tsy ampy ny fampiasana banky, nefa manana karazana tolotra ho an’ny sokajin’asa rehetra.
Tsy ampy 3% ny olona afaka mindram-bola amin’ny banky. Araka ny fanadihadiana, mbola sarotra ny fifampiraharahana amin’ny banky eto an-toerana. Tsy fahazaran’ny maro ny fifandraisana amin’io rafitra iray io, manambara ihany koa ny fahantrana mahazo vahana. Ireo fepetra maro takina, efa sakana na ho an’ireo olona manam-bola aza.
Ireo banky tsy miditra amin’izay, mety tsy mahatafaverina ny volany, moa ny ankamaroan’ny mponina tsy mahafeno izay fepetra takina aminy, indrindra ny antoka. Na misy aza izany, mbola manalasala. Ambony noho izany ny tahan’ny zanabola ka ny vitsy no afaka mindrana sy mampiasa vola. Tsy mivelatra ihany koa ny sehatra fampiasam-bola, ny efa be mpampiasa ihany no hindramam-bola, ka voafetra ny tolotra.
Noho ireo antony rehetra ireo, mila maka traikefa amina firenen-kafa i Madagasikara ny ahazoana mampiasa ny vola anatin’ny sehatra ara-dalàna. Ohatra, ny fanamoràna ny fifandraisana eo amin’ny samy banky, hisian’ny fifaninanana madio ao anatin’izao fivoaran’ny teknolojia izao.